Maimaim-poana ny Mpisolovava - mpisolovava ny Lalàna
Maimaim-poana ny Mpisolovava — mpisolovava ny Lalàna
Ny fiarovana ny zo ara-dalàna no natao ho ny olona rehetra ao amin’ny United States, na izany aza dia matetika ny vola lany ny solontena ara-dalàna izay miaro ny olona amin’ny fampiharana ireo zo. Manoloana izany, mety misy ny sasany fanampiana ho an’ireo izay mitady ara-dalàna ny hanampy nefa tsy manam-bola handoavana izany. Raha ny fisian’ny sy ny karazana maimaim-poana mpisolovava miovaova be, diniho ireto manaraka ireto ao amin’ny fikarohana: — Raha toa ianao ka miatrika fiampangana heloka bevava dia matetika mitondra ny lohateny hoe ny mpiaro ny vahoaka raha afaka mampiseho ny mila. (Izany dia miankina amin’ny karazana fiampangana heloka bevava sy ny hamafin’ny ny fiampangana mba hamaritana raha toa ianao ka mitondra ny lohateny hoe na tsy) — Ho-pirenena ny raharaha, maimaim-poana mpisolovava mety ho hita amin’ny alalan’ny fikambanana eo an-toerana sy ny vondrona izay miasa mba hanome ny underrepresented amin’ny fitsarana. Jereo eo an-toerana fisotroana fikambanana sy ara-dalàna ny vondrona mba hahitana raha toy izany vondrona misy. Ny fikarohana maimaim-poana ho an’ny mpisolovava dia mety mitaky asa sasany eo amin’ny anjara, fa fiarovana ny zo ara-dalàna no tena zava-dehibe noho izany aza kivy tsy misy aloha ny mitady rehetra ny safidy. Rehefa mitady maimaim-poana ny mpisolovava, dia ho manan-danja mba hitondra na inona na inona izay tsy maintsy mifandray amin’ny ara-dalàna filazana. Misy tahirin-kevitra, firaketana ara-pitsaboana, ny tatitry ny polisy, na ny fifandraisana amin’ny antoko mpanohitra dia ho ilaina ho an’ny famerenana ny mpisolovava. Raha ny free mpahay lalàna dia mitaky fa hihaona antoka ara-bola ny fepetra takiana alohan’ny miasa ho anao, hitondra ny vaovao ilaina. Izany dia azo antoka fa ny raharaha dia fizahana ary nanomboka haingana araka izay azo atao. Ataovy azo antoka fa manana ny rehetra ny daty, fotoana, sy ny anarana vonona ny mpisolovava. Mety mila avo roa heny hanamarina fa manana ny rehetra ny zava-misy mivantana eo anatrehan’ny fivoriana ny mpisolovava. Ny marina kokoa dia afaka ho amin’ny famaritana ny zava-misy, ny tsara kokoa ny mpisolovava afaka hanompo anao. Maimaim-poana ny mpisolovava, dia matetika no tsy hanambara amin’ny fomba mahazatra ny dokam-barotra. Fa tsy, maimaim-poana ara-dalàna ny asa dia azo omena amin’ny alalan’ny fitsarana sy ny lahatsoratra dia mety ho hita ao an-toerana courthouses na masoivohon’ny governemanta. Tokony hampiasa misy ny loharanon-karena tsy maintsy misy rehefa mitady maimaim-poana ny mpisolovava. Ny fifandraisana eo an-toerana ara-dalàna ny fikambanana, ny Fanjakana Fisotroana Fikambanana, ary hafa ny sampan-draharaha izay mety hanampy hitarika anareo ho maimaim-poana ny mpisolovava. Ny aterineto dia afaka manome harena ny vaovao mikasika ny ara-dalàna ny asa izay mety ho hita ho anao. Tranonkala ity, dia afaka manome anao ny tsara manomboka eo amin’ny fikarohana maimaim-poana ho an’ny mpisolovava. Mampiasa ny fitadiavana asa teo an-tampon’ny ny pejy mba hahita sy mampitaha free mpisolovava ao amin’ny faritra misy anao. Rehefa mivory miaraka amin’ny mpahay lalàna, ataovy azo antoka fa manana ny rehetra azo jerena ny antontan-taratasy, ny antontan-taratasy, sy ny antontan-taratasy mikasika ny raharaha. Raha toa ka misy ny mpitandro ny tatitra na ara-pitsaboana rakitsoratra anjara, izany no zava-dehibe fa mitondra azy ireo ny mpisolovava, na manome fanazavana ampy izany fa ny mpisolovava afaka mahita azy ireo sy ny famerenana azy ireo. Ianao dia handeha ho any mila manome tsipiriany momba ny zavatra fantatrao momba ny raharaha. Azo antoka fa manana ny marina ny daty, fotoana, ny anarana, sy ny toerana mialoha ny fihaonana tamin’ny mpisolovava. Raha toa ka mila fanampiana ny fivoriana miaraka amin’ny mpahay lalàna, miomana mba hitondra ny hafa itokisana ny olona mba hanampy anao mivory miaraka amin’ny mpahay lalàna.
Misy mpahay lalàna fa mitady dia mila manana diplaoma avy amin’ny deraina lalàna sekoly ary efa lasa ny fisotroana ao amin’ny fanjakana. Raha free mpisolovava afaka ny ho samy hafa rehetra ny karazam-mpisolovava, avy amin’ny tsy miankina lafo mpisolovava fanatanterahana pro bono takiana na ny governemanta nomen’ny mpisolovava, tokony hiezaka mba ho azo antoka manana ny mpisolovava izay mahay hisolo tena ianao. Miezaha mba hahitana fanazavana momba ny mpisolovava ny fototra sy ny traikefa mialoha ny hamelana azy ireo mba hiasa eo ny raharaha. Na dia mpisolovava iray dia azo omena amin’ny tsy misy vidiny, tsy hanaiky misy fanehoana fa tsy mahazo aina. Ny mpisolovava tokony hanana ny fahafahana araka ny tokony ho rakitra ara-dalàna ny antontan-taratasy sy manoro hevitra anao ny zo ara-dalàna. Raha tsy afa-po miaraka amin’ny mpisolovava ny asa, ny fahafahana misafidy na ny fifandraisana vondrona izay manome ny mpisolovava mba miezaka ny miasa avy izay mety manana olana ianao. Tokony ho afaka ihany koa mba hampivelatra ny fifandraisana amin’ny mpisolovava. Maimaim-poana ny mpahay lalàna dia tsy maintsy miara-miasa aminao amin’ny antony tsy tapaka sy ny fifandraisana mba haharitra mandritra ny volana na taona maro, arakaraka ny tranga. Raha mino ny mpahay lalàna dia manao zavatra iray tsy matihanina na tsy ara-dalana, mifandray amin’ny fanomezana fahefana mba manome antoka fa ny zo ho arovana, ary ny raharaha dia tsy very noho ny mpahay lalàna ny zavatra nataony. Mazava ho azy, maimaim-poana ny mpisolo vava dia tsy azo omena raha tsy misy vidiny ny mpanjifa. Na izany aza, raha toa ka hitanao fa misy tsy ampy ny mpisolovava izay dia hiasa amin’ny zava-nitranga tsy lany, misy safidy hafa arakaraka ny karazan’ny raharaha. Raha naratra tamin’ny lozam-piarakodia na karazana ratra manokana ny tranga, ny mpisolovava, dia matetika miasa amin’ny kisendrasendra fototra.
Midika izany fa tsy maintsy mandoa ny upfront saran’ny ny mpisolovava
Ny mpahay lalàna ihany no manangona ny sarany raha toa soa aman-tsara handresy sy ny mari-pankasitrahana na hitondra anao ny vola ponenana. Ireo mpisolovava dia matetika maka ny ka hatramin’ny ny fitambaran’ny loka toy ny onitra. Izany dia afaka ny ho sarobidy saran’ny rafitra ho an’ireo izay tsy manam-bola ny lafo be upfront ny vola lany fa solontena ara-dalàna matetika dia mitaky. Satria maimaim-poana mpisolovava matetika dia tsy maintsy miasa amin’ny toe-javatra maro amin’ny fotoana iray, manontany tena fotoana izy ireo dia ho afaka hanokana ny raharaha ary mandra-pahoviana izy ireo manantena ny raharaha mba handeha. Hianatra ny fisian’ny ny mpisolovava, ny fomba mba hifandray aminy, ary aiza izy ireo dia natao mba hihaona. Dia mila mahalala hanome azy ny vaovao farany ao amin’ny fanovana ny toe-javatra, ary izy ireo dia ilaina mba contact ianao mba hanoro hevitra anao amin’ny raharaha ary noho ny fanapahan-kevitra. Maimaim-poana ny mpisolovava fizaham-pahasalamana dia hita avy ireo mpisolovava izay vonona hampiasa voalohany ny momba ny raharaha sy manoro hevitra anao amin’ny fomba miroso. Matetika, nandritra ireo fizaham-pahasalamana maimaim-poana, ny mpahay lalàna dia hilaza aminareo ny dingana mila atao mba hampandrosoana ny asa, ary inona no karazana solontena ara-dalàna dia mila nandritra ireo dingana. Maimaim-poana midinika matetika mialoha ara-dalàna ny asa izay karama, na amin’ny isan’ora, fisaka, na kisendrasendra ny tahan’ny. Fizaham-pahasalamana maimaim-poana no manome torohevitra araka ny lalàna; na izany aza, izy ireo matetika ihany no manan-danja amin’ny fahalalana ny karazana ara-dalàna ny asa ianao dia mila atao. Maimaim-poana ny mpisolovava ny asa samy hafa avy maimaim-poana ny mpisolovava fizaham-pahasalamana satria maimaim-poana mpisolovava asa hanomezana solontena ara-dalàna ireo izay tsy manam-bola izy ireo. Maimaim-poana ny mpisolovava asa manampy ny ambany-tena, ny mahantra, ary ireo izay tsy afaka mikarakara ny tenany. Maimaim-poana ny mpisolovava ny tolotra azo omena ny governemanta, izay notendren’ny fitsarana, na ny nomen’ny tsy miankina sy tsy mitady tombontsoa ny vondrona. Tsy misy tsiambaratelo ny mpampanoa lalàna mpanjifa fifandraisana namorona amin’ny alalan’ny fampiasana Lalàna momba ny tranonkala sy ny fanazavana omena ao amin’ny tranonkala ity dia tsy ara-dalàna ny toro-hevitra.
Ho ara-dalàna ny toro-hevitra, mba andefaso ny mpampanoa lalàna
Mpisolovava voatanisa ao amin’ny vohikala ity dia tsy hoe na manaiky amin’ny alalan’ny tranonkala ity. Amin’ny alalan’ny fampiasana Lalàna, ianao manaiky ny Lalàna Iombonana ny Fampiasana
Lalàna Mifehy Ny Heloka Bevava